About us - Zhongshan Amor agesi Zikagesi Co., Ltd.
Eyasungulwa ngo-2016, i-amor ingumkhiqizi oqeqeshiwe we-OEM / ODM noMxhumanisi woMkhiqizo nge-Innovation, ikusize ukuthi ufeze inhloso yakho, futhi izonikeza abantu ngempilo yesimanje ngobuchwepheshe obusha.
Esikhathini esifushane sokukhula kube yintuthuko yokuthengisa yonyaka eyizigidi eziyi-10 USD, setha intuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza kwelinye lamabhizinisi akhiqiza ugesi wokukhiqiza kagesi. Le nkampani ihlanganisa indawo engaba ngamamitha-skwele ayi-10000, yakhe isitshalo esimisiwe, ukukhiqizwa okuphelile kwamayunithi we-5000, imikhiqizo evela ekuthengeni izinto zokusetshenziswa, noma inqubo yokukhiqizwa komkhiqizo nokuhlolwa ngokuya ngezwe kanye uhlelo lomhlaba wonke lokunikezwa kwezitifiketi oluzosetshenziswa; manje imikhiqizo yethu ithunyelwa e-Asia, e-Afrika, eYurophu nase-United States nasemazwekazini amazwe nezifunda,
IZhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd. ingene esivumelwaneni sokuhlangana neFoshan Shunde North Conductor Industry Co., Ltd .. izigidi ezingama-20 zokuthengisa ngonyaka. Okuhlanganisiwe kwenzeka ngoJanuwari 1, 2019 ngemuva kwamahora ebhizinisi. izindawo ezivulwe njengeFoshan Shunde North Conductor Industry Co, Ltd. Amagatsha eShunde: - China shunde 2nd ring road 8, Wisdom building 6th Floor.
Isitatimende sombono we-amor sisenza sikwazi ukuletha izixazululo "zohlobo olulodwa" eziqhuba impumelelo nokukhula kwamakhasimende ethu - okudala amathuba okuthengisa amasha anenzuzo kithi nakwabalingani bethu. Sizothatha amakhasimende ethu nabalingani bethu ngaphezu kwemikhiqizo ngayinye namandla abo. Sizogqugquzela imibono emisha evela kubuchwepheshe:
I-Amor iguqula indlela izinhlangano ezihlanganyela ngayo nolwazi ngobuchwepheshe obuxhunyiwe. Ngokunikeza iphothifoliyo ebanzi yokuphathwa kwemibhalo ewina imiklomelo kanye nezixazululo zokubonisa, i-Amor isiza amabhizinisi ukudala, ukuphatha, ukubona ngeso lengqondo nokwabelana ngolwazi, okwenza kube lula ukuhlola imibono nokusebenzisana ngezindlela ezintsha. Kusuka ku-New Innovation kuya kuzixazululo zokuphathwa kwemibhalo, u-Amor owandisa ububanzi bezobuchwepheshe basehhovisi, izinsizakalo kanye nokwesekwa kuklanyelwe ukwenza imininingwane ibe ngaphezulu kokuqukethwe, uketshezi, ukusebenza futhi ekugcineni kufinyeleleke kalula, imibono ekhuthazayo evela kubuchwepheshe.